सच्चा राष्ट्रियता गरीबी सकेसम्म चाँडै कसरी मेट्ने भन्ने हो
The flag of Nepal (Photo credit: Wikipedia)
In response toaFacebook post byafriend.
(१) नेपाल र भारत को जस्तो नजिक को सम्बन्ध कुनै दुई देशको छैन, अमेरिका र कनाडा को पनि छैन। त्यो जनता लेवल को कुरा। र त्यो तराई का मधेसी को मात्र होइन। नेपालको प्रत्येक समुदाय को कुरा। शाह राणा को पनि "बेटी-रोटी" कै सम्बन्ध हो। हिमाली भेग को कुरा गर्ने हो भने तिब्बती शरणार्थी सबै भारत मै छन। यता दार्चुला, उता धारचूला, मान्छे दुबै तिर उस्तै।
(२) सरकार लेवल को कुरा गर्ने हो भने भारत मा जुन सुकै सरकार आए पनि हाम्रो नेपाल संग जस्तो राम्रो सम्बन्ध अरु कुनै देशको सरकार संग छैन भन्छ। के भनेको होला?
(३) नेपालका प्रत्येक पार्टी का नेता दिल्ली धाउँछन्, र त्यो भु-राजनीति बुझ्नेले अप्राकृतिक मान्दैन। चन्द्रमा पृथ्वी वरिपरि घुम्छ, पृथ्वी सुर्य वरिपरि घुम्छ। बरु राजनीति र लोकतंत्र बुझ्नेले सोध्छ, भारत ले ठग्छ भन्ने त्यत्रो ठुलो डर छ भने नेपालको संसदले अर्को देश सँग गरिने कुनै पनि संधि सम्झौता नेपालको संसद मा पुर्ण बहसमा लगेर बहुमत ले अनुमोदन गर्न पर्ने प्राबधान किन नराखेको? २०४६ पछि मलाई अलि कति excited पारेका नेपालका प्रधान मंत्री दुईटा छन। कृष्ण प्रसाद भट्टराई र बाबुराम भट्टराई। बाबुराम ले गरेको BIPPA सम्झौता कति राम्रो। तर उसकै उप प्रधान मंत्री, त्यो पनि उसकै जिल्लाको, त्यो BIPPA को बिरोध गर्दै हिँडेको। कत्रो नौटंकी। बिरोध हो भने के को बिरोध, त्यो specific रुपमा कहिले भनिएन। कागले कान लग्यो, लग्यो भने पछि लग्यो लग्यो। फेरि बाबुराम भनेको धोती लाउने गजेन्द्र नारायण होइनन् , सप्तरीको मधेसी, भारतको मान्छे यसले भारतकै सोंच्यो भन्ने "ह्रितिक रोशन सिंड्रोम" आरोप लाग्दो हो। बाबुराम भनेको त १९५० को संधि धांधली भो खारेज गर नत्र भने भन्दै बन्दुक उठाएको मान्छे। माओबादीले बन्दूक उठाएको ४-५ बर्षसम्म मैले उसको बाहेक अरु कुनै माओबादी को नाम सम्म सुन्या थिएन। नेहरू खुदले विश्व स्तरको नेता मानेको BP ले पनि देशै बेचने रै छ, बन्दूक उठाउने SLC Board First बबुरामले पनि देशै बेचने, के रै छ त त्यस्तो?
(४) बाबुराम लाई म अझै BP लेवल को मान्दिन। तर फेरि प्रधान मंत्री बनेर उनी नेपालका नीतिश कुमार बन्छन् भने all bets are off. म आफु बामपंथी होइन (म नेपालको परिप्रेक्छ्य मा कांग्रेसी पनि होइन, anti-Congress हो) तर बामपंथी नै सही फिडेल को education र health सेक्टर का कामहरू गरेर देखाउन सक्नु पर्यो।
(५) लोकतंत्र भनेको जनता ले दिग्गज मान्छे खोज्ने र त्यो दिग्गजले ५ बर्ष एकलौटी शाषण गर्ने भनेको होइन। भारत संग गर्ने समझौता हरु नेपालको संसदले पुर्ण बहसमा लाने र बहुमत ले पास गर्ने ब्यबस्था गर्ने हो। त्यति गर्दा पनि भारत ले ठग्ने रहेछ भने नेपाल त भारत ले ठग्नु पर्ने देशै रै छ भन्ने हुन्छ। कोही कोही हुन्छ नि पाकेटमार लाई सजिलो पारिदिने बानी भएको मानिस। त्यस्तो।
(६) तर मुख्य कुरा अझ त्यो होइन। मुख्य कुरा नेपालका नेताहरूको competence or rather lack of it को हो। आफ्नो कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न जुन कुरा को दोष पनि भारत लाई दिई दिने। Dictatorships thrive on the external enemy, नार्थ कोरिया ले अमेरिका सँग निहुँ खोजिरहने कारण त्यो हो। तर नेपालका नेता हरुले लोकतंत्र मा पनि त्यही कुराको सहारा लिएका छन। It should not be possible तर भइराखेको छ। चुनाब ले मात्र लोकतंत्र हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण Russia छ। नेपाल लोकतंत्र भई सकेको छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ।
(७) पुरानो सत्ताका status quoist हरु हर तरहले दमजम का मुद्दा हरुमा पुराणो सोंच कायम राख्न तत्पर छन। स्टेट restructuring हुन नदिन हर किसिमका हथकंडा अपनाउन लागि राखेका छन।
(८) नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजेको आरोप कति लाई लाग्यो त्यो गनेर साध्य छैन, त्यो राजनीति होइन गाईजात्रा हो। अस्ति मोदी आउनु अगाडि समझौता का जुन फर्स्ट ड्राफ्ट हरु आएका थिए केही knee jerk nationalist हरुले "नेपाललाई भुटान बनाउन खोजेको" आरोप लगाए। म त चकित भएँ। अरे बाबा, भुटान दक्छिण एशिया को सबै भन्दा गरीब देश बाट quite literally रातारात दक्छिण एशिया को सबै भन्दा धनी देश बनेको कहानी हो। सिंगापुर र स्विट्ज़रलैंड पछि बनाउने पहिला भुटान नै बनाउने कि नेपाललाई?
(९) नेपाल बाट गरीबी सकेसम्म चाँडै कसरी मेट्ने - त्यो भन्दा ठुलो राष्ट्रबाद नेपालको सन्दर्भमा हुन सक्दैन। त्यस मापदंड़ अनुसार अहिले को नेपालको political class खचाखच अराष्ट्रीय तत्व हरुले भरिएको देखि राखेको छु। मोदीले सही भनेका छन -"Nepal can become developed nation by supplying power to India." बोलीले होइन ब्यबहार ले हो राष्ट्रबाद झल्किने, तर नेपालको पोलिटिकल क्लास लाई चिंता छ, नेपाल developed नेशन भयो भने जनता जागरुक हुन्छन् अनि फेरि हामी लाई कसले वोट दिने? त्यो घोर अराष्ट्रीय तत्व thinking हो।
(१०) मोदीले वास्तव मै नया किसिमको सम्बन्ध चाहेका छन, त्यसको फाइदा न उठाउनु मुर्खता नै हुनेछ।
Demographics of Nepal India Kantipur Nepal Nepal government Nepali language Rupee Russia